‘लकडाउन’ राउटे बस्ती ! « Khasokhas
‘लकडाउन’ राउटे बस्ती !
कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० को सङ्क्रमण रोकथामका लागि सरकारले ‘लकडाउन’ घोषणा गरेपछि कर्णाली प्रदेशका राजधानी सुर्खेत सुनसान बनेको छ । आम नागरिकलाई अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाट निस्कन रोक लगाएपछि वीरेन्द्रनगर ‘लकडाउन’को दोस्रो दिन बुधबार पनि सुनसान बनेको हो ।
राउटे बस्ती पनि लकडाउन
कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले बहिरङ्ग सेवा ९ओपिडी० बन्द गरेको छ । अस्पतालका निर्देशक डा डम्बर खड्काले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहन केही समयलाई ओपिडी सेवा बन्द गर्नुपरेको जानकारी दिनुभयो । आपतकालीन सेवा भने सञ्चालनमा छ । ज्वरो, रुघाखोकीका बिरामीको जाँच भइरहेको छ । यद्यपि, अहिलेसम्म त्यस्ता बिरामीलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने अवस्था नआएको उहाँले बताउनुभयो । ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्दा बिरामीको भीडभाड बाक्लो हुने हुँदा कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम रोकथाम गर्न यस्तो निर्णय गर्नुपरेको अस्पतालको भनाइ छ ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले बाटोमा यात्रु अलपत्र परे हटलाइन नं १११० मा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ । हटलाइनमा प्राप्त सूचनाका आधारमा प्रदेश सरकारले यातायातको प्रबन्ध गरी अलपत्र यात्रुको उद्धार गर्नुका साथै प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेछ । स्वास्थ्य परीक्षणकै आधारमा क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने वा गन्तव्यसम्म पु-याउने भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ ।
सङ्घका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग दमकल र पानीको सहयोग लिई सार्वजनिकस्थलमा क्लोरिन पाउडर छरिएको बताउनुभयो । यो पाउडरले कोरोनाका किटाणुबाट बच्न सहयोग गर्दछ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत पर्शुराम खड्काले विभिन्न ब्याक्टेरिया भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न क्लोरिन पाउडरले मद्दत पु-याउने बताउनुभयो । उक्त पाउडर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अस्पताल, नगरपालिका, बजार क्षेत्रलगायतका सार्वजनिकस्थलमा छरिएको छ ।